C.Kariin Xuseen G: Nasiib daro xukuumadda hada jirta ee Soomaaliya ayaan ahmiyad badan siinin maqnaanshaha Somaliland iyo midnimadda dalka – Somali Top News
C.Kariin Xuseen G: Nasiib daro xukuumadda hada jirta ee Soomaaliya ayaan ahmiyad badan siinin maqnaanshaha Somaliland iyo midnimadda dalka
May 18, 2020 May 18, 2020 Somali Top News	0 Comments
Madaxweynihii hore Galmudug iyo Wasiirkii hore Amniga Gudaha Cabdikariin Xuseen Guuleed ayaa ka hadlay halka ay ka dambeeyeen wada hadalka Soomaaliya iyo Somaliland oo marar kala duwan xiligii uu Wasiirka ahaa ka qaybgalay.
Guuleed ayaa sheegay in Siyaasad ahaan loo baahan yahay in si daacadnimo ku jirto loo guda galo wadahadalka Dowladda Federaalka iyo Maamulka Somaliland oo sheegta in Soomaaliya ay ka madax banaan yihiin, inkasta oo aysan helin aqoonsi.
“Dhammaan Shacabka reer Somaliland iyo maamulkoodu waxey mudanyihiin in aan ku bogaadino guullaha ay ka gaareen nabadda, horumarka, dib-uheshiinta, hannaanka doorashooyinka, wadajirka bulshadda iyo hirgalinta nidaamka axsaabta. Qof walba oo nabad iyo nidaam ka hirgaliyay taako ka mid ah dhulka Soomaaliddu degto waa tusaale xigasho iyo ammaan mudan” ayuu yiri Cabdikariin Xuseen Guuleed.
Waqtiga fog ee Somaliland ay qabaneyso Munaasabaddaan isla markaana sanad waliba ay maamuusto 18-ka May waxa uu ku sheegay carruurtii dhalatay ay maanta qaarkood xilal hayaan halka kuwo kalena ay waxbarteen, loona baahan yahay ka dhaadhicinta midnimada.
“Maanta 29 sano ayaa laga joogaa markii ay walaalaha reer Soomaliland iclaamiyeen gooni isu-taag dhankooda ah. Dhalaankii maalinkaas dhashay, hada waa masuul iyo aqoonyahan talada qeyb ka ah. Haddaba si jiilka noocaas ah loogu qanciyo wadajirka iyo midnimadda Soomaaliya waa arrin u baahan qorshe weyn, faham caafimaad qaba, qirrasho sugan, dad ku dhacleh iyo tanaasul siyaasadeed” ayuu sii raaciyay Madaxweynihii hore ee Galmudug.
Waxa uu soo hadal qaaday doorkii uu ku lahaa wada hadalkii ka dhacay dalka Turkiga iyo waxyaabaha uu ka xusuusto mas’uuliyiintii Maamulka Somaliland ee goobjooga ka ahayd kala saxiixashada heshiiska labada dhinac.
“Waxaan ka mid ahaa dadkii hormuudka u ahaa wadahadalladii Soomaaliya iyo Somaliland xilligii Dowladdii hore. Waxaan xusuustaa iney walaallaheen reer Somaliland dabacsannaan muujiyeen, howshuna ay joogtay meel fiican oo laga sii amba-qaadi karay, laakiin nasiib daro xukuumadda hada jirta ee Soomaaliya ayaan ahmiyad badan siinin maqnaanshaha Somaliland iyo midnimadda dalka”.
Waa uu sii hadlay waxa uuna yiri “Inta ay Somaliland naga maqantahay, ma jiri karto qaranimo taam ah, wax badan ayaana Dowladnimadda Soomaaliya uga xayiran wadahadalladaas, sidaa darteed waxaan codsanaya in Dowladda Federaalka ah ay dib u billaawdo wadahadalladii socday oo xaggeeda ka xayirmay”.
Cabdikariin Xuseen Guuleed Madaxweynihii hore ee Dowlad Goboleedka Galmudug, sidoo kale soo noqday Wasiirka Amniga Gudaha Dowladdii Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud waxa uu sifeeyay nuuca wada hadal ee la doonayo in lala galo Somaliland.
“Waxaana ku talinayaa maadaama qadiyadda Somaliland ay noqotay mid 30 jirsatay in howsha lagu wajaho geedi socod wadahadal oo ka fog laab-lakac, gacan maroojin huwan isxambaar siyaasadeed oo bilaa qorshe ah iyo khiyaano”.
Ugu dambeyn waxa uu shaaciyay in qof waliba oo hoggaanka dalka qabta taariikhda dalka ay ka qori doonto doorka uu ku yeesho wadahadalka Soomaaliya iyo Somaliland iyo ka dhaadhicinta midnimada.
Waxa uu soo jeediyay Guuleed in Madaxda sare ee dalka aysan maankooda ka saarin wadajirka Somaaliya oo muhiim u ah dib usoo celinta Jamhuuriyadda Soomaaliya.
“Qof walba oo Villa Soomaaliya qabta, waa loo xisaabin doonaa waqtiga uu galiyay iyo sida uu u maareeyay qadiyadda Somaliland oo ah arin muhiim u ah wadajirka umadda Soomaaliyeed” ayuu kusoo gaba-gabeeyay qoraalkiisa Cabdikariin Xuseen Guuleed.
← Heritage : Caqabahada Hortaagan Hirgelinta Xeerka Doorashooyinka Soomaaliya
Dagaal beeleed ka dhacay duleedka magaalada Gaalkacayo →
Deg Deg: Jubbaland oo xiriirka u jartay dowladda Federalka, kana mamnuucday isu socodka
Akhriso: Heshiisyada Soomaaliya iyo Qatar kala saxiixdeen?
Netherlands oo aqoonsatay Baasaboorka Diblomaasiga iyo kan Shaqaalaha